::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather दुर्गा खरेल : स्वरमै जादु:: Rojgar Manch ::
दुर्गा खरेल : स्वरमै जादु
सोमवार, २०७३ बैशाख १३ गते १७:३०
दुर्गा खरेल । नेपाली गीत संगीत क्षेत्रकी चर्चित गायिका । उनै गायिकाका सांगितिक तथा व्यक्तिगत जीवनका विविध पाटाहरु को सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछु । दुर्गा खरेलले नेपाली आधुनिक गीतको क्षेत्रमा धेरै गीत तथा गजल गाइसकेकी छिन् । त्यसै गरी उनले नेपाली पप गीतहरुमा पनि आफ्नो सुमधुर स्वर दिएकी छिन् ।
मलाई हेरेर हैरान बनाउछ त्यो काले काले काले केटाले ...अहिलेको उनको चर्चित गीत हो । रिलिज भएको छोटो समयमा नै उक्त गीतले प्राप्त गरेको लोकप्रियताले गायिका दुर्गा खरेल निक्कै उत्साहित देखिन्छिन् ।
कार्तिक ५ गतेका दिन झापाको भद्रपुरमा आमा लक्ष्मी खरेल र बुवा खेमराज खरेलबाट उनको जन्म भएको हो ।
दुर्गाको बाल्यकाल झापामै बित्यो । विद्यालय जीवन देखि नै बिभिन्न गायन प्रतियोगितामा भाग लिदैं, पुरस्कार जित्ने दुर्गालाई गायनमा लागिरहन परिवारले सधै साथ दियो ।
उनले नमुना मा.वि. भद्रपुर, झापामा कक्षा १ देखि ७ सम्म अध्ययन गरिन् भने कक्षा ८ देखि प्रवेशिका सम्म भद्रपुर मा.वि. मा अध्ययन गरिन् ।
प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनी काठमाण्डौ प्रवेश गरिन् । प्रदर्शनी मार्ग स्थित रात्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट मानविकी तर्फ प्रविणता प्रमाणपत्र तह सम्मको अध्ययन पुरा गरे पछि उनले संगीतको बाटो रोजिन् ।
२०५९ सालमा उनी अनुराग संगीत विद्यालयमा संगीत अध्ययनको लागी भर्ना भइन् । त्यहा गुरु राम सिटौला संग उनले संगीत को ज्ञान हासिल गरिन् ।
पछिल्लो समय गायिकाहरु पनि ग्ल्यामरमा निकै आगाडी देखिन थालेका छन । उनका पहिरन होस् या हाउभाउ कुनै चलेका मोडलका भन्दा कम देख्न देखिदैन । दुर्गा खरेलले पनि आफुले स्वर दिएका कतिपय गीतहरुमा आफैले मोड्लिङ्ग गर्ने गरेकी छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘गायिकामा स्वर भएर मात्र पुग्दैन, आर्कषण पनि चाहिन्छ । अचेल एल्बम भन्दा पनि गायक गायिकाको बाच्ने आधार भनेको स्टेज कार्यक्रम हो । स्वरका साथै स्टेजमा पनि आफुलाई जति आर्कषक देखाउन सक्यो त्यति नै यस्ता कार्यक्रममा स्थान पाउन सकिन्छ । अचेल ग्ल्यामर पछाडी रहेका गायिका स्वर भए पनि पछी पर्ने अवस्था छ ।’
आफ्ना गीतमा आफैले मोडलिङ्ग गर्दा एक त मोडलको खर्च पनि बचत हुने, अर्को स्रोताले गायिका चिन्ने अवसर प्राप्त गर्ने हुनाले पनि मोडलिङ गर्दाको दोहोरो फाइदा पुग्ने उनले सुनाइन् ।
गायिका दुर्गा खरेलले केहि समय अघि ‘दिल’ शीर्षकको एकल एल्बम सार्वजनिक गरिसकेकी छन् । उक्त एल्बमको ‘किन किन उनीलाई‘’ गीत लोकप्रिय मात्रै भएन, गायिका खरेललाई दुई भिन्न एवार्ड समारोहमा सर्वोत्कृष्ट पप गायिकाको एवार्ड दिलाउन समेत सफल भयो । सोही एल्बमको ‘वैश जस्तो बादल’ गीतबाट उनले छिन्नलता पुरस्कार समेत प्राप्त गरेकी छन् । उक्त गीतमा सुरेश अधिकारीको संगीत तथा दिनेश अधिकारीको शब्द रहेको छ ।
२०६२ सालमा नेपाली तारामा भाग लिएकी दुर्गा खरेल उक्त प्रतियोगितामा छैठौं भइन् । त्यसपछि काठमाण्डौमै बसेर संगीत क्षेत्रमै केहि गर्ने अठोटका साथ संगीतकै अध्ययन सुरु गरेकी दुर्गाले संगीत प्रभाकर गरेकी छिन् ।
२०६६ सालमा आफ्नो पहिलो एल्बम दिल लिएर संगीत क्षेत्रमा औपचारिक प्रवेश गरेकी दुर्गाको यहि एल्बमको किन किन बोलको गीत हिट भएपछि उनले कहिले पछाडी फर्कनु परेन ।
चलचित्र दिलमायाको छुट्छ की साथ, टुट्छ की नाता बोलको गीत गाउदै सुरु भएको उनको रजतपट यात्रा पनि सुरुवात देखि नै सुखद रहृयो । छिन्नलता पुरस्कार समेत प्राप्त गरेकी दुर्गा खरेलले ‘दीलमाया’ को ‘छुट्छ कि साथ टुट्छ कि नाता’ गीतबाट पाश्र्वगायनमा नेफ्टा चलचित्र एवार्ड, ‘रिमझिम रिमझिम पानी पर्यो’ बाट विन्ध्वासिनी एवार्ड, ‘मेची महाकाली मिचियो’ गीतबाट इमेज एवार्ड तथा ‘किन किन’ गीतबाट विन्ध्यवासिनी एवार्ड पाइसकेकी छन् ।
भर्खरै मात्र आफ्नो दोस्रो एल्बम ‘युग’ बजारमा ल्याएकी गायिका दुर्गा खरेल गायन क्षेत्रमा लागेर आफूले धेरै कुरा पाएको बताउँछिन् । साथै आफु सारै भाग्यमानी भएको सम्झिन्छिन् ।
केटाकेटी अवस्था देखि नै गायिका बन्ने उनको सपना अहिले साकार मात्र भएको छैन, नेपाली संगीतमा उनी अब्बल गायिकाको रुपमा स्थापित समेत भइसकेकी छिन् ।
यी चर्चित गायिका दुर्गा खरेल अविवाहित गायिका हुन् ।
उनका गीतहरुमा जस्तै उनको जीवनमा पनि भर्खर बैस फक्रिएको छ । उनलाई हेर्नेहरु र चाहनेहरुको ठुलो लर्को छ यति बेला बजारमा ...मलाई हेरेर हैरान बनाउँछ त्यो काले काले काले केटाले ...बोलको गीत र उक्त गीतमा आफैले मोडलिङ्ग गरेर चर्चा बटुलेकी दुर्गा खरेललाई मैले भेट्दा उनलाई एकै चोटी दुइटा प्रश्न सोधेको थिए तपाइको बास्तविक जीवनमा पनि तपाईलाइ त्यसरी नै हेरेर हैरान बनाउने कोही काले केटा छ कि ? अनि गायन र मोडलिङ्ग मध्ये तपाईको प्राथमिकता कुन ?
उनले सहजै जवाफ दिइन् – ‘मैले गाएको गीत जस्तै छ मेरो जीवन पनि । हैरान बनाउनेहरु धेरै छन् ।’
सुगम संगीत तथा पाश्र्वगायनमा लोकप्रिय भएकी गायिका हुन् दुर्गा खरेल ।
सुगम संगीतबाटै आफ्नो सांगीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेर नेपाल चलचित्रमा अहिले सबैभन्दा व्यस्त तथा लोकप्रिय भएका संगीतकार हुन् अर्जुन पोखरेल ।
संयोगको कुरा के छ भने गायिका दुर्गा खरेलका अधिकांश लोकप्रिय गीतका संगीतकार अर्जुन पोखरेल नै रहेका छन् । आधुनिक गीत होस् अथवा चलचित्रको गीत, या पप गीत, संगीतकार पोखरेलको संगीतमा गायिका दुर्गा खरेलले गाएका अधिकांश गीत लोकप्रिय भएका छन् । यसैबेला गायिका खरेल र संगीतकार पोखरेलको सहकार्यमा ‘युग’ एल्वम पनि बजारमा आइसकेको छ ।
सुमधुर स्वर कि धनी गायिका दुर्गा खरेलको आगामी संगितिक यात्रा सफल रहोस्, आगामी दिनमा उनीद्धारा स्वरवद्ध सुमधुर गीतहरुले नेपाली संगितिक आकाश अझ सिंगारियोस । यहि कामना ।
(लेखक पौडेल रेडियो सिटी एफ.एम. ९८.८ का चर्चित कार्यक्रमहरु स्वर संगालो, संगीत संगालो, शब्द संगालो र विचार मञ्चका प्रस्तोता एवं लिस्नर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष हुन्)